sawirada ciidamada gaalada ah ee itoobiya oo ku soo biiray gaalada amison ee jooga soomaaliya | ΚÜ šôõ ÐΗΔwΑΑw βìŸΔcΔÞ∑ ↓
sawirada ciidamada gaalada ah ee itoobiya oo ku soo biiray gaalada amison ee jooga soomaaliya
January 23, 2014 · by biyacade	· in HOME.	·
Baydhabo – Mareeg.com: Shalay oo aheyd 22-ka bisha Janaayo 2014, Midowga Afrika ayaa magaalada Baydhabo uga dhawaaqay in tiro ka badan 4 kun oo askari oo Itoobiyaan ah ku biireen howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM.
Ciidamada Itoobiya ayaa la sheegay iney qeyb ka qaadanayaan guluf colaadeed o Midowga Afrika doonayo in Alshabaab looga saaro gobollada Soomaaliya ee ay weli ka taliyaan, kuwaasoo isugu jira bartamaha iyo koonfurta dalka.
Itoobiya oo ciidamadeedu muddo dheer kusoo laalaabanayeen dhulka Soomaaliya ayaa horay uga biya diidi jirtay iney hoostagto AMISOM, hase ahaate Itoobiya ayaa badeshay fekerkeedii hore kadib markii uu geeriyooday Raysul wasaarihii hore ee dalkaas Males Zenawe, uuna xilka la wareegay Hailamariam Deisglin.
Halkaan ka daawo sawirrada ciidamada Itoobiya oo Baydhabo loogu xirayo koofiyadda iyo astaanta ciidamada AMISO
← Ruuxaani oo ku baaqaya doorasho loo qabto siiriya
SAWIRADA WASIIRADA CUSUB →